Ahoana ny fomba hifohazana maraina ary ho mailo, na dia mankahala maraina aza ianao - -Kevi-Pitantanana
Tsy misy zava-dehibe kokoa noho ny torimaso tsara mba hampitomboana ny famokarana ary hanana andro mahavokatra sy mahafinaritra. Tsy mila fahadiovana torimaso tsara fotsiny ianao fa mila mahafantatra ihany koa ny fomba hifohazana maraina, mailo ary ho vonona hanombohana ny andro mahavokatra.
Fa maninona no ilaina ny matory tsara sy matory tsara?
Ny tsingerin'ny torimaso sy ny fifohazana kalitao dia manampy amin'ny fahasalamana sy fahasalamana amin'ny ankapobeny, ary manampy amin'ny fampihenana sy tantano ny adin-tsaina . Ankoatr'izay, ny fahadiovan'ny torimaso mahasalama dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny fahaketrahana sy fanahiana .
Noho izany, andao jerena ny fomba ahafahanao mifoha maraina sy hahatsapa ho tsara raha manao izany, na dia mankahala maraina aza ianao! (Ahem - tsy misotro kafe 10 litatra!) Misy torohevitra 13 daholo, voazara ho faritra telo lehibe, manomboka amin'ny…
Mahita torimaso lalina sy milamina
Ny mifoha maraina, mailo ary vonona handresy ny andro dia atomboka amin'ny torimaso tsara. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso dia mamela anao hiala sasatra tsara, afaka hifoha ary vonona hiarina ny ampitso maraina. Ahoana anefa no hanatsaranao ny kalitaon'ny torimasanao?
1. Atombohy amin'ny toerana fatorianao. Mahazo aina ve ny fandrianao? Ny fandriana sy ondana ahazoana aina dia afaka manampy anao hatory haingana kokoa, hatory lalindalina kokoa ary hifoha matanjaka kokoa amin'ny maraina. Ny fametahana kidoro dia fomba tsy lafo hanatsarana ny fampiononana raha tsy te hividy farafara vaovao na kidoro kidoro ianao. Ny ondana vaovao koa dia mety hampiasa vola amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso.
2. Diniho izay fanelingelenana mety hanelingelina ny fahafahanao matory. Betsaka ny olona te hatory mijery programa amin'ny fahitalavitra na solosain'izy ireo. Ny feo sy hazavana avy amin'ny efijery dia afaka manakana anao tsy hianjera ao ny dingana lalina kokoa amin'ny torimaso . Mety ho hitanao fa mifoha ianao amin'ny alàlan'ny dokambarotra na tabataba mafy. Raha mila feo matory ianao, dia misy karazana mpamorona tabataba fotsy na mpankafy aza mety ho safidy tsara kokoa.
3. Ahoana ny amin'ny varavarankely sy ny ambainanao? Manana hazavana be ao anaty efitrano na amin'ny manodidina ny lambanao ve ianao? Ny ambain mainty dia fomba tsara hanakanana ny jiro ivelany tsy hanelingelina ny fahafahanao miditra torimaso lalina, na manaitra anao aloha loatra.
4. Aza mihinana sy misotro be loatra ao anatin'ny ora vitsivitsy alohan'ny hatory - indrindra izay misy kafeinina. Izany dia hampihena ny vintana ilanao mankany amin'ny trano fidiovana amin'ny misasakalina (mety ho be dia be ny rano amin'ny sakafo hariva, ary koa ny tsakitsaky toy ny voankazo).
fambara fa te hiara-matory aminao fotsiny izy
Izany dia mandeha amin'ny alikaola ihany koa. Ny olona sasany dia maniry ny hanana vera misy divay na zava-pisotro alohan'ny hatory. Na dia mety manampy anao hatory aza izany, ny alikaola dia manelingelina ny fahaizanao manatratra lalina sy milamina torimaso, izay misy fiatraikany ratsy amin'ny fahafahanao mifoha ny ampitso maraina. Toy izany koa no hita amin'ny vokatra nikôtinina.
5. Ferano ny fisakafoanana antoandro. Na dia fialamboly mahafinaritra sy be voninahitra aza ny fikotranana, dia manelingelina ny fahafahanao matory amin'ny alina izany. Na dia manapa-kevitra ny amin'ny torimaso atoandro aza ianao dia aza soratana aorian'ny 5 hariva satria hanelingelina ny torimaso iny alina iny.
6. Ary ho an'ireo tia biby any, tsy tsara ny mamela ny biby fiompinao hatory miaraka aminao. Ny fihetsik'izy ireo sy ny tabataban'izy ireo dia afaka manaitra anao, mitarika anao hiala amin'ny torimaso lalina ary hanasarotra anao hifoha maraina.
Famantarana 8 manaitra anao ara-tsaina sy ara-pihetseham-po (+ Inona no hatao amin'izany)
Fanapahana ny fahazarana matory
Te hifoha maraina sy mailaka? Mila miala amin'ny fahazarana matory ianao. Misy olona sasantsasany izay hikapoka ny bokotra snooze imbetsaka alohan'ny hisintonana azy ireo hiala ny fandriana. Ary maninona no tsy? Reraka ianao! Marina? Eny, ny fitsangatsanganana mandritra ny dimy ambin'ny folo minitra ka hatramin'ny adiny iray alohan'ny hialana eo am-pandriana dia mety hitondra ny antony mbola reraka.
Ny olona miaina ny bokotra fitsangatsanganana dia matetika tsy matory aloha loatra ny alina talohan'izay ka vao mainka sarotra ny mifoha maraina. Amin'ny fitsangatsanganana tsy tapaka, mampianatra ny atidohanao (ary amin'izany ny vatanao) mba tsy hifoha eo noho eo.
7. Aza manadino fa mametraha fanairana iray ary mifikira ao. Misy safidy sy vokatra maromaro any ho an'ny olona izay mahavoa ny snooze. Safidy tsotra ny fametrahana ny famantaranandro fanairana amin'ny alàlan'ny efitrano, noho izany dia mila mitsangana mandehandeha eny ianao. Misy ihany koa ny rindranasa sy vokatra mahatonga anao hamaha ny piozila hamonoana ny fanairana anao, manery anao hieritreritra ary hanomboka hifoha.
Ny karazana fanairana ampiasainao dia afaka manamaivana ny fifindrana manomboka amin'ny torimaso mankany amin'ny fifohazana. Ny fampiharana famantaranandro fanairana sasany dia manome sehatra fanairana izay mampiakatra tsikelikely ny feo mandra-pifohazanao. Ity fitomboana miadana tsikelikely ity, manamaivana anao ho amin'ny fanjakana mifoha, dia mety ho tsara kokoa noho ny fidona mafy amin'ny fanairana mitabataba.
8. Mifidiana fotoana fatoriana miorim-paka izay hahafahanao mahazo torimaso adiny valo eo ho eo. Ny tsy fitoviana dia mety ho sarotra amin'ny fianakaviana na amin'ny fandaharam-potoanan'ny asa tsy misy fotony, saingy mahasoa tokoa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso sy ny fahaizanao mifoha.
Fotoana hialana amin'ny fandriana!
Fotoana hialana amin'ny farafara izao rehefa mandeha ny fanairana. Mila mifoha ianao, manomboka mihodinkodina ary mihodina ny rà mba ho zatra mihetsika ianao rehefa maneno ny fanairana.
9. Manao fanatanjahan-tena ve ianao? Ny fampihetseham-batana antsasak'adiny dia tsy vitan'ny hoe miteraka angovo bebe kokoa sy fomba fiaina salama kokoa, fa manampy anao matory haingana kokoa amin'ny alina. Ampidiro amin'ny andronao ny fampihetseham-batana, na dia mandeha fotsiny ilay alika na mihazakazaka eo amin'ny fitoeran-tongotra mandritra ny fotoana kelikely. Fotoana fohy aorian'ny fifohazanao dia fotoana tsara hampiasana fampiharana amin'ny fandaharam-potoananao, alohan'ny handehanan'ny andro be atao. Isaky ny misafidy ny hanao izany ianao, ny zava-dehibe dia ny manao azy ho lohalaharana. Manaova fanatanjahan-tena amin'ny pensilihazo ao anatin'ny fandaharam-potoanananao be atao ary mifikira aminy toy ny adidy lehibe hafa.
10. Fipoahana rano mangatsiaka azo antoka fa afaka manampy anao hampifoha anao, na ao amin'ny fandroana io, na manasa ny tavanao ao am-pisotrana. Ary miresaka momba ny rano…
11. Arotsaho amin'ny rano mangatsiaka sy mamelombelona ny vera na roa avy hatrany rehefa avy mifoha ianao. Ny vatanao sy ny sainao dia hankasitraka ny rehydration aorian'ny torimaso tsara. Ny olona dia mitsambikina mitsambikina misotro kafe na misotro angovo aza, nefa ireo kosa dia tsy hampisotro rano anao bebe kokoa rehefa avy tsy mandeha rano mandritra ny alina. Ny tsy fahampian'ny fahiratan-tsaina sy ny fahalavoana dia matetika azo avy amin'ny tsy fahampian-drano.
12. Sakafom-pisakafoanana maraina manome angovo tena ilaina mba hampandehanana anao maraina. Tsy tokony ho zavatra mihoa-pampana. Na ny lovia serealy na voankazo aza dia mihoatra ny ampy ahafahanao mandeha.
13. Manampia feo sasany hanentanana bebe kokoa! Fantatra tsara fa ny mozika ankafizinao dia hanampy ny atidohanao hamoaka dopamine sarobidy. Henoy ny mozika manainga, manome aingam-panahy, na mahatsapa tsara rehefa maraina. Raha mila fampiroboroboana bebe kokoa ianao dia azonao atao ny misafidy podcast manaitra, boky audio, na lahateny TED manentana ny saina .
Ampivoary ny fahazarana
Ny fampivelarana fahazarana no lakilen'ny fifohazana maraina. Tsy momba ny ataonao fotsiny ny maraina rehefa mifoha ianao. Ny momba ny fomba hitondranao ny fiainanao, ny fandrafetanao ny andronao, ny akora apetrakao ao amin'ny vatanao ary ny tontolo iainana andramanao hatory. Ny famoronana fomba vaovao sy ny fampivelarana ireo fahazarana ireo dia mila fotoana sy ezaka be. Vokatry ny fanovana sy fivoarana fahazarana matory tsara kokoa dia tsy miseho tampoka.
Tohizo ihany anefa. ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fampitomboana fahazarana vaovao sy tsara kokoa dia ny tsy fitoviana.
Fantaro ireo toerana malemy ao amin'ny fahadiovanao amin'ny torimaso, miasa amin'ny fanitsiana ireo, ary tokony ho mora kokoa ny mifoha maraina, mailo ary vonona handresy ny andronao!
ny fomba fanaovana shift 8 ora mandeha haingana
inona ny toetra tadiavinao amin'ny namana
ny fomba fanaovana fotoana mandeha haingana any an-trano